ကိုရိုနာဖြစ်ပွားချိန် ကင်ဆာရောဂါပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း : ဘာလုပ်ရမည်နည်း ဘာမျှော်လင့်ရမည်နည်း စိတ်တည်ငြိမ်စွာထား၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ : ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားချိန်အကြား ကင်ဆာရောဂါပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း
AR - العربيةEN - English
ပင်မစာမျက်နှာကျန်းမာရေးအချက်အလက်May 2020ကိုရိုနာဖြစ်ပွားချိန် ကင်ဆာရောဂါပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း : ဘာလုပ်ရမည်နည်း ဘာမျှော်လင့်ရမည်နည်း စိတ်တည်ငြိမ်စွာထား၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ : ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားချိန်အကြား ကင်ဆာရောဂါပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း
մայիսի 05, 2020 CancerExcellenceMadePossibleHorizonCancer
စာရင်းကိန်းဂဏန်းများအရ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်အောင် ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီး အခြားဖျားနာမှုများ မရှိသရွေ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်နိုင်မှုအခွင့်အလန်းများ သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာဖြစ်ပွားမှု အတော် နဲပါးသည်။ သို့သော်လည်း ကင်ဆာရောဂါရှိသူများအတွက် ရောဂါနှင့် ကုသမှုများကြောင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်သည် ကျဆင်းသွားစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကင်ဆာလူနာများသည် မိမိကိုယ်မိမိ ယခင်ကထက်ပို၍ ဂရုစိုက်ရန် လိုအပ်သည်။ အကြောင်းမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုကြောင့် ၄င်းတို့အတွက် ပိုမိုဆိုးရွားသော အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့် ကုသမှုဆက်လက်ခံယူရန် သို့မဟုတ် အရေးပေါ်ဖြစ်ပွားပါက ဆေးရုံသွားရန် မကြောက်ရွံ့ပါနှင့်။ သင်သည် စိတ်တည်ငြိမ်စွားထားရှိသရွေ့ ကိုရိုနာကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေချိန်တွင်ပင်လျှင် သင့်အနေဖြင့် ကင်ဆာရောဂါကုသမှုကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ယခုအချိန်တွင် တကမ္ဘာလုံးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ လူနာပေါင်း ၁,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ကျော်ရှိသည်။ သင် ယခုဆောင်းပါး ဖတ်နေချိန်တွင် ဤအရေအတွက်သည် တဖြည်းဖြည်း တိုးပွားနေလိမ့်မည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုကူးစက်ခံရသည့် နိုင်ငံပေါင်း ၁၄၅ နိုင်ငံကျော်ရှိသည်။
တကမ္ဘာလုံးသည် လက်ရှိအချိန်တွင် အကျပ်အတည်း အတူရင်ဆိုင်နေရသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ပထမဦးဆုံးစတင်ဖြစ်ပွားရာနေရာဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကိန်းဂဏန်းများအရ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာအများစုသည် ရောဂါလက္ခဏာ မပြင်းထန်ဘဲ ပုံမှန်ကုသပျောက်ကင်းနိုင်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာပြင်းထန်သူများသည် ရှိနေပြီးသော အန္တရာယ် အနေအထားများ ဥပမာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်း၊ နာတာရှည်ရောဂါရှိခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်အားနဲခြင်း စသည်တို့ ရှိလေ့ရှိသည်။
ယခု ကင်ဆာဆိုရင်ကော ဘယ်လိုလဲ? အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသလား? အန္တရာယ်ရှိပါက ကင်ဆာရောဂါကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းမပြုဘဲ ကိုဗစ်-၁၉ မှ ကင်းလွတ်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ? ဤမေးခွန်းများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အဖြေရှိသည်။
ကင်ဆာရောဂါသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုအန္တရာယ် ပိုမိုများပြားနိုင်ပါသလား?
ကိုဗစ်-၁၉ သည် တုတ်ကွေးကဲ့သို့ ဗိုင်းရပ်ပိုးကူးစက်မှုတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ပိုမိုပြင်းထန်သော ရောဂါလက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအား ဗိုင်းရပ်တစ်မျိုးမှ တိုက်ခိုက်ခံရပါက ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်သည် အဏုဇီဝမူမမှန်မှုများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရေးတာဝန် လုပ်ဆောင်သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ အတွက်လည်း အလားတူ လုပ်ဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်အောင် ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီး အခြားဖျားနာမှုများ မရှိသရွေ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်နိုင်မှုအခွင့်အလန်းများ သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများ ဖြစ်ပွားမှု အတော် နဲပါးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လုံလောက်စွာ အိပ်စက်အနားယူခြင်း၊ ဟန်ချက်ညီသည့် အဟာရများစားသောက်ခြင်း၊ သီးခြားနေထိုင်ခြင်း၊ ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်များ လိုက်နာခြင်း ရှိသရွေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗိုင်းရပ်ကို ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်ပြီး အနဲငယ်ဆေးကုသမှုဖြင့် ပြန်လည် ကောင်းမွန်နိုင်သည်။
သို့သော်လည်း ကင်ဆာရောဂါရှိသူများအတွက် ရောဂါနှင့် ရောဂါကုသမှုများ - ရောင်ခြည်ကုထုံး၊ ဓာတုကုထုံး၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးကုထုံး သို့မဟုတ် အချို့သောစားဆေးများ - ကြောင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်သည် ကျဆင်းသွားစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကင်ဆာလူနာများသည် မိမိကိုယ်မိမိ ယခင်ကထက်ပို၍ ဂရုစိုက်ရန် လိုအပ်သည်။ အကြောင်းမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုကြောင့် ၄င်းတို့အတွက် ပိုမိုဆိုးရွားသော အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အထွေထွေအကြံပြုချက်များသည် အခြားသူများအား ပေးသကဲ့သို့ - ဆပ်ပြာနှင့် ရေဖြင့် သို့မဟုတ် အယ်လ်ကိုဟောဖြင့် အနည်းဆုံး ၂၀ စက္ကန့်ကြာ မကြာခဏ လက်ဆေးခြင်း၊ လူစုလူဝေးရှိသည့်နေရာများသို့ သွားလာမှု ရှောင်ကြဉ်ခြင်း (သွားရမည်ဆိုပါက နှာခေါင်းစည်း အမြဲတပ်ခြင်း)၊ အခြားသူများနှင့် အနည်းဆုံး ၂ မီတာ ခွါ၍ နေထိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကင်ဆာလူနာများ အထူးသဖြင့် အဆုတ်ကင်ဆာလူနာ သို့မဟုတ် သွေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ကင်ဆာလူနာများသည် အခြားလူများထက် ပို၍ စည်းကမ်းတကျ ရှိရန် လိုအပ်သည်။ ဓာတုကုထုံး သို့မဟုတ် ရောင်ခြည်ကုထုံး ခံယူဆဲလူနာများ (သို့မဟုတ် ကုထုံးခံယူပြီးစ လူနာများ)နှင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကုထုံး သို့မဟုတ် အခြားပစ်မှတ်ထားကုထုံး ခံယူပြီးသည့်လူနာများသည် အဆိုပါကုသမှုများမှ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသောကြောင့် အထူး သတိထားရမည်။ ၄င်းတို့သည် လူများနှင့် ၂ မီတာအကွာတွင် နေရန် လိုအပ်သည်။ ဤတွင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေရသည့်မိသားစုဝင်များ သို့မဟုတ် လာရောက်လည်ပတ်သည့်ဆွေမျိုးများ ပါဝင်သည်။ လူနာနှင့် မိသားစုဝင်များသည် ဆက်သွယ်ရပါက မိမိ၏မိသားစုဝင်အချင်းချင်းပင်ဖြစ်စေ နှာခေါင်းစည်း တပ်သင့်သည်။
အိမ်ထောင်စုတစ်စုတည်းတွင် နေထိုင်သူများပင် ဖြစ်စေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ တူညီသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အားလုံးကို လိုက်နာရန် အလေးထားရမည်။ အလေးမထားပါက ၄င်းတို့သည် ကိုဗစ်-၁၉ သယ်ဆောင်ပေးသူများအဖြစ် အန္တရာယ်ရှိသည်။ ကွင်းဆက်တခုသည် အားအနဲဆုံးအဆက်အသွယ်ဖြစ်သလောက် ခိုင်မာမှုရှိသည်ကို သတိရပါ။
ဆရာဝန်နှင့် ချိန်းဆိုချက်ရှိပါက ဘာလုပ်သင့်သလဲ? သွားနိုင်ပါသလား?
ပထမဆုံးအဆင့်မှာ ဆရာဝန်တွေ့ရန် သင့်တော်ခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်မည့် ဆေးရုံမှ သင်၏ ဆရာဝန်နှင့် စကားပြောဆိုရန် ဖြစ်သည်။ ဤတွင် လူနာအခြေအနေသည် အဓိကစဉ်းစားရမည့် အချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဥပမာ ဆက်လက်ကုသမှု ခံယူရန်လိုအပ်သည့် ဓာတုကုထုံး သို့မဟုတ် ရောင်ခြည်ကုထုံး ခံယူနေရဆဲအချိန်ကာလအတွင်းရှိလူနာများ။ စီစဉ်ထားသည့် ကုသမှုအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် အန္တရာယ် ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအဆင့်မှ လူနာများအတွက် ဆရာဝန်သည် ဝေးလံသော ဆက်သွယ်ရေးကို ဦးစားပေးသည့်အနေဖြင့် ချိန်းဆိုမှုကို ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်သည်။
သင့်အနေဖြင့် ဆေးဝါးထပ်မံလိုအပ်ပြီး ဆရာဝန်မှ ကိုယ်တွေ့စစ်ဆေးရန် မလိုအပ်ဘဲ ဆေးဆက်သောက်ရန် သင့်တော်သည်ဟု ထင်မြင်ပါက သင့်ကိုယ်စား ငယ်ရွယ်၍ ကျန်းမာသော မိသားစုဝင်တဦးဦးအား ဆေးလာရောက်ယူရန် အကြံပြုသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက သင်၏ဆရာဝန်သည် သင့်အား ကိုယ်တွေ့စစ်ဆေးမှုအတွက် လာရောက်ရန် ညွှန်ကြားနိုင်ပြီး နောက်တကြိမ် ဆရာဝန်ချိန်းရက် နောက်ဆုတ်နိုင်ရန် သာမန်ထက်ပို၍ စားဆေးများ ပိုပေးနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ပါက သင် သို့မဟုတ် သင့်မိသားစုဝင်များ ခရီးသွားချိန်အတွင်း အန္တရာယ်ဖြစ်ပွားမှု ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ဆေးများကို စာတိုက်မှတဆင့် ပို့ပေးလိမ့်မည်။
လူနာ သို့မဟုတ် ၄င်းတို့၏မိသားစုဝင်များသည် အခြေအနေဆိုးရွားမှု သို့မဟုတ် ဆေးကုသရန်အရေးပေါ်အခြေအနေကို သတိထားသင့်ပြီး လူနာကို ဆေးရုံသို့ မြန်နိုင်သမျှ အမြန် ခေါ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် ဆေးရုံသို့ မသွားရဲသည်အထိ ကိုဗစ်-၁၉ ကို မကြောက်ရွံ့ပါနှင့်။ ဆေးရုံအားလုံးသည် ဤအခြေအနေများတွင် ဝန်ထမ်းများနှင့် လူနာများအား ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ချက်များ စီမံထားရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း သင့်အနေဖြင့် အမြဲတမ်း ကြိုတင်ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားသင့်ပြီး ဆေးရုံမရောက်မီ ဆေးရုံဝန်ထမ်းများ၏ ကြိုတင်သတိပေးချက်များ သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာသင့်သည်။ အစီအစဉ်များသည် အခြေအနေအလိုက် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ကိုဗစ်-၁၉ သည် ယခုအချိန်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း မငြင်းဆန်နိုင်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြိုတင် သတိပြုရမည့်အချက်များနှင့် မိမိကိုယ်မိမိ ကာကွယ်ရန် အစီအမံများ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ စည်းကမ်းတကျ ရှိပါ။ စိတ်တည်ငြိမ်စွာ ထားပါ။ လူစုလူဝေးရှောင်ကြဉ်မှုများ လုပ်ဆောင်ပါ။ မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည်မှလွဲ၍ အခြားသူများမှ ထပ်တလဲလဲ ထိတွေ့မှုရှိသည့် အရာများကို ထိတွေ့ခြင်း ရှောင်ရှားပါ။ သင့်လက်ကို မကြာခဏ ဆေးပါ။ ဤအရာအားလုံးကို သင်၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစနစ်၏ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါ။ သို့မှသာ ထိရောက်သောကာကွယ်ဆေး ရနိုင်သည့်အချိန်တွင် သင်နှင့် သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများသည် ဤအကျပ်အတည်းမှ အတူတကွ ကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
ခေါင်းစဉ် : မစဉ်းစားမိခြင်းမှကာကွယ်ရေးးကူးစက်တတ်သောမျှော်လင့်ချက်ဖြင့် နာမကျန်းမှု ရင်ဆိုင်ခြင်း
“ကျနော့်ဇနီး ခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်မိမိ နှစ်သိမ့်မှုအပေးဆုံး စကားလုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ အကောင်းဆုံးအတွက် မျှော်လင့်နေပါတယ်။” များပြားသော ဤစကားလုံးများသည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ သံတမန် ရင်သားကင်ဆာရောဂါကုသနေသည့် Sameer Sharma ၏ ချစ်လှစွာသောဇနီးဘဝအတွက် ဖွင့်ဟချက် ဖြစ်သည်။
စက်ရုပ်နှင့်ဓာတ်ရောင်ခြည် : ခေတ်မီသိပ္ပံပညာဖြင့် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ မည်သို့ဖြတ်ထုတ်သနည်း
စက်ရုပ်အကူအညီဖြင့် da Vinci ခွဲစိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် Da Vinci® Prostatectomy သို့မဟုတ် စက်ရုပ်ဖြင့်ဆီးကျိတ်ဂလင်း ခွဲစိတ်ခြင်း (Robotic Prostatectomy) သည် ထိုးဖောက်မှုအနည်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အလွန်အနုစိတ်ကင်မရာများဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသသည့်နေရာမှ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအနီးကပ်ပုံကို ဆရာဝန်များအတွက် ရရှိနိုင်သည်။ လူသား၏ လက်နှင့် လက်ကောက်ဝတ်လှုပ်ရှားမှုကို တုပထားသည့် စက်ရုပ်လက်တံများသည် ဆရာဝန်အတွက် တိကျပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူမှု ရှိစေသည်။ အခြားအလားတူ အရေးပါသော ခွဲစိတ်ကုသမှုမှာ ဓာတ်ရော	င်ခြည်ကုထုံး (brachytherapy) ဖြစ်ပြီး သေးငယ်သောဖန်ပြွန်မှတဆင့် ကင်ဆာအသားပိုသို့ ဓာတ်ရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတ်ပေးမှုထဲ့သွင်းခြင်း ပါဝင်သည်။ ကင်ဆာဖြစ်ပွားသောအသားပိုသို့ မြင့်မားသော ဓာတ်ရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ကျရောက်ပြီး ဘေးပါတ်ဝန်းကျင်သို့ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကျရောက်မှု နည်းပါးစေသည်။
ခွဲစိတ်မှုရောဂါဗေဒ : ကုသမှုရှေ့ဆောင်လမ်းပြ
“ကျမကိုယ်တိုင် တချိန်က Horizontal ဒေသဆိုင်ရာကင်ဆာဌာနမှာ ကင်ဆာလူနာတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၆ နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ယခုတိုင် ကျမ ပုံမှန် ဆေးစစ်နေပါတယ်။ ကျမရဲ့ဆရာဝန် အကြံပြုချက်အတိုင်း ကျမ လိုက်နာပြီး ဟော်မုန်းဆေးဝါး မလွဲမသွေ မှီဝဲပါတယ်။ ကျမကိုယ်ကျမ ကိုယ်ခန္ဓာကျစ်လစ်အောင် ကြံ့ခိုင်အောင် နေပါတယ်။ ကျမ မပြောရင် ကျမမှာ ကင်ဆာရှိဘူးတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ဘူး။ ကျမ အခြားကင်ဆာလူနာတွေကို ပြောချင်တာက မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ အမြဲရှိပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါက သေဒဏ်ကျခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတောင် နောက်ဆုံးမှာ ကျမဘဝကို ဒီမှာ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နေပါတယ်။ ကင်ဆာလူနာ ဘယ်နှစ်ယောက် ဒါကိုကျော်လွှားခဲ့တယ် ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဆက်လက်နေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာ ကျမ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကို ဘယ်တော့မျှ အလျှော့မပေးဘူး။ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်ပါတယ်”